UPDATE: Laba Kooxood oo Isku Rasaaseeyay Magaalada Muqdisho (Xog Dhammeystiran)
07 August, 2017 in Wararka by BANA Mogdishu Office
Warar cusub ayaa kasoo kordhaya israsaaseynta kulul ee hadda kasocota magaalada Muqdisho.
Ciidanka Nabad suggidda AMISOM iyo qaar kamid ah dhallinyaradii saakadii hore ku banaan baxday isgoyska Namber afar ayaa is fahmi waayay, taas oo aan saakay aad ku akhrisateen wararkeenii hore.
Markale ayeey bajaajlayaasha sameeyeen banaan bax kawayn kii hore, waxaana ay markaan isku dayeen in ay AMISOM iska caabbiyaan haddii ay is hor istaag kusameyso banaan baxa ay aragtidooda ku muujinayaan.
Sidii la filayay ba ciidanka AMISOM ayaa isku dayay in ay kala eryaan dhallinyaradii bajaajlayaasha ahaa ee iskudayga labaad sameeyay; waxaana ka dhashay in ay dhallinyarada tuuryo iyo dagaal kala horyimaadaan AMISOM, baddalka AMISOM ayaa laqsiiyay xabbado maar ah, oo waa ay rasaaseeyeen.
MArkii ay AMISOM bilaawday xabadeynta dhallinyaradaas Bajaajlayaasha ah, waxaa middaas ka gadooday ciidankii Soomaalida ahaa ee ku sugnaa isgoyska Namber Afar ee magaalada Muqdisho, iyagoo u hiilinaya dhallinyarada Soomaaliyeed ayeey xabbad ugu jawaabeen AMISOM, taas oo keentay in ay israsaaseeyaan, labada dhinac.
Gadiidka gurmadka degdegga ah ee Amblasta ayaa hadda kusii qulqulaya goobta uu shilka ka dhacay, oo ah inta u dhaxeysa Bankiga Primier ee magaalada Muqdisho iyo Aarggada Km4.
Wixii warar ah sidoo kale halkan kala soco.